Ny 'Red Snow's' Trailer dia manolotra tantara momba ny vampira Krismasy mambabo
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny 'Red Snow's' Trailer dia manolotra tantara momba ny vampira amin'ny Krismasy
by Trey Hilburn III Desambra 23, 2021
by Trey Hilburn III Desambra 23, 2021 17,385 hevitra
Tsy isan'andro ianao no mahazo tantara Krismasy vampira. Noho izany, Snow Mena toa miavaka. Raha ny marina, i Jacob Davison antsika manokana dia nijery izany nandritra ny vanim-potoanan'ny Fetibe ary nanome naoty ambony ary nilaza fa "mampiditra rà vaovao amin'ny karazana vampira."
Ny tranofiara dia manome antsika fijery tsy miangatra momba ny tontolon'ny vamp izay voalaza ao anatin'ny faritry ny lanezy Krismasy.
Ny synopsis ho an'ny Snow Mena mandeha toy izao:
Rehefa niova ho vampira tsara tarehy ny ramanavy iray naratra, dia nanafina azy tao amin'ny garazy i Olivia Romo, mpanoratra tantara an-tsary mampihoron-koditra, mba hiarovana azy amin'ny mpihaza vampira. Tezitra tamin'ilay zavaboary izy, dia nanome ran'ny biby azy, saingy tsy ela dia voasakana izay mety hisian'ny fifankatiavana rehefa nisy andian-jiolahy mpanendaka nanafika tao an-tranony hitady ny namany tsy hita.
Ny sarimihetsika dia nosoratan'i Sean Nichols Lynch sy notarihin'ny kintan'i Dennice Cisneros, Nico Bellamy, Laura Kennon.
Snow Mena tonga amin'ny VOD, DVD ary nomerika manomboka ny 28 Desambra.